Vaovao - Firy no fantatrao momba ireo sary sokitra 10 malaza eran-tany?
Firy amin'ireo sary vongana 10 ireo no fantatrao manerantany?Amin'ny lafiny telo, ny sary sokitra (sary sokitra) dia manana tantara sy fomban-drazana lava ary fitazonana zavakanto manan-karena. Ny marbra, varahina, hazo ary fitaovana hafa dia voasokitra, sokitra ary sokitra mba hamoronana sary kanto hita maso sy azo tsapain-tanana miaraka amin'ny habaka iray, taratry ny fiainana ara-tsosialy ary maneho ny fahatsapana kanto an'ireo mpanakanto, Ny fanehoana kanto ny idealy hatsarana.Ny fampandrosoana ny zavakanto sokitra tandrefana dia niaina tampon'isa telo, maneho ny sary feno ny kanto araka ny ahalalantsika azy. Nahatratra ny tampony voalohany tany Gresy sy Roma taloha izy io. Ny tampon'isa dia Phidias, raha ny Renaissance italianina kosa no tampon'isa faharoa. Tsy isalasalana fa i Michelangelo no tampon'isa amin'ity vanim-potoana ity. Tamin'ny taonjato faha-19 dia noho ny zava-bitan'i Rodin i Frantsa ary niditra tamin'ny tampon'ny fahatelo.
Taorian'ny Rodin, ny sary sokitra tandrefana dia niditra tamin'ny vanim-potoana vaovao-ny vanim-potoana sokitra maoderina. Mpanakanto sary sokitra dia manandrana manala ireo gadra sarin-tsarimihetsika kilasika, mandray endrika fomba fiteny vaovao ary manaraka hevi-baovao.
Amin'izao fotoana izao, azontsika atao ny mampiseho ny zavaboary kanto sy ny zava-bita isaky ny vanim-potoana amin'ny alàlan'ny tantaram-panaingoana kanton'ny sary sokitra, ary ireo sary sokitra 10 ireo dia tsy maintsy fantatra.
Ny tratran'i Nefertiti dia sary miloko vita amin'ny 3,300 taona vita amin'ny vatosokay sy ny lalotra. Ny sarivongana voasokitra dia Nefertiti, ilay Vadin'ny Mpanjaka Lehibe an'ny firaiketam-pirenen'ny egyptiana taloha Akhenaten. Inoana amin'ny ankapobeny fa ity sarivongana ity dia nosokirin'ny mpanao sary sokitra Thutmose tamin'ny 1345 talohan'i JK.
Ny tratran'i Nefertiti dia nanjary iray amin'ireo sary nankasitraka be indrindra an'i Egypte taloha niaraka tamin'ny ankamaroan'ny fanontana. Izy io dia ilay fampirantiana kintana ao amin'ny Berlin Museum ary raisina ho toy ny mari-pamantarana hatsarana iraisam-pirenena. Ny sarivongan'i Nefertiti dia nofaritana ho toy ny iray amin'ireo zava-kanto malaza indrindra amin'ny kanto taloha, azo ampitahaina amin'ny sarontava an'i Tutankhamun.
“Ity sarivongana ity dia mampiseho vehivavy manana hatoka lava, volomaso mahitsy miendrika tsipìka, hazondamosina avo, orona lava manify, ary molotra mena mitsiky be. Mahatonga an'i Nefertiti ho zavakanto taloha. Iray amin'ireo vehivavy tsara tarehy indrindra. ”
Misy ao amin'ny tranombakoka vaovao ao amin'ny Museum Island in Berlin.
Andriamanibavin'ny fandresena ao Samothrace
Ny andriamanibavin'ny fandresena ao Samothrace, sarivongana marbra, 328 cm ny haavony. Izy io dia sangan'asa vita tamin'ny sarivongana malaza tafavoaka tamin'ny andron'ny Grika taloha. Heverina ho harena tsy fahita firy io ary tsy azo dinihina ny mpanoratra.
Izy io dia fitambaran'ireo zavakanto henjana sy malefaka natao hahatsiarovana ny faharesen'i Demetrius, ilay mpandresy an'i Samothrace tamin'ny ady an-dranomasina grika taloha, nifanandrina tamin'ny andian-tsambon'i Ptolemy mpanjaka tany Egypt. Tokony ho tamin'ny taona 190 talohan'i JK, mba handraisana ireo mpanjaka sy miaramila nandresy, dia natsangana teo alohan'ny tempoly teo Samothrace ity sarivongana ity. Manoloana ny rivotra avy any an-dranomasina, namelatra ny elany tsara tarehy ilay andriamanibavy, toy ny hoe hamihina ireo mahery fo tonga teny amoron-dranomasina izy. Ny lohany sy ny sandrin'ilay sarivongana dia efa nopotehina, fa ny vatany tsara tarehy dia mbola azo aharihary amin'ny alàlan'ny akanjo manify sy mivalona, ​​mamelombelona ny fahavelomana. Ny sarivongana iray manontolo dia manana fanahy be dia be, izay maneho taratra tanteraka ny foto-keviny ary mamela sary tsy hay hadinoina.
Ny Louvre misy any Paris dia iray amin'ireo harena telo ao amin'ny Louvre.
Aphrodite an'i Milos
Aphrodite of Milos, fantatra koa amin'ny hoe Venus miaraka amin'ny Broken Arm. Izy io dia ekena ho sarivongana tsara indrindra eo amin'ireo sarivongana vehivavy grika hatreto. Aphrodite dia andriamanibavin'ny fitiavana sy ny hatsaran-tarehy amin'ny angano grika taloha, ary iray amin'ireo andriamanitra roa ambin'ny folo an'ny Olympus. Aphrodite dia tsy andriamanibavin'ny firaisana ihany, fa andriamanibavin'ny fitiavana sy ny hatsarana koa izy eto amin'izao tontolo izao.
Aphrodite dia manana endrika tonga lafatra sy endrika bikan'ny vehivavy grika taloha, maneho ny fitiavana sy ny hatsaran'ny vehivavy, ary heverina ho marika ambony indrindra amin'ny hatsarana ara-batana vehivavy. Fangaroana kanto sy hatsaran-tarehy izy io. Ny fitondran-tenany sy ny fiteniny rehetra dia mendrika hotehirizina sy hampiasa maodely iray, saingy tsy afaka maneho ny fahadiovan'ny vehivavy izany.
Ny endrik'ireo sandrin'i Venus very tamin'ny Broken Arms tany am-boalohany dia nanjary lohahevitra miafina izay liana indrindra amin'ireo mpanakanto sy mpahay tantara. Ny sary sokitra dia misy ao amin'ny Louvre any Paris, iray amin'ireo harena telo.
Ny sary vongana varahina an'i Donatello "David" (t. 1440) no asa voalohany namelomana indray ny lovantsofina taloha an'ny sarivongana miboridana.
Ao amin'ilay sarivongana, io tarehimarika ara-Baiboly io dia tsy tandindon'ny foto-kevitra intsony, fa fiainana, fiainana nofo sy ra. Ny fampiasana sary miboridana hanehoana sary masina sy hanasongadinana ny hakanton'ny nofo dia manondro fa misy dikany lehibe io asa io.
Tamin'ny andro nanjakan'i Heroda mpanjakan'ny Isiraely tamin'ny taonjato faha-10 talohan'i JK, dia nanafika ny Filistina. Nisy mpiady antsoina hoe Goliath, izay 8 metatra ny halavany ary nitondra fitaovam-piadiana goavambe. Tsy sahy niady nandritra ny 40 andro ny Isiraelita. Indray andro, ny zatovolahy David dia nandeha namangy ny rahalahiny izay miaramila. Reny fa manjakazaka be i Goliata ka nandratra ny fahatokisan-tenany. Nanantitrantitra izy fa hanaiky ny fahafaham-baraka nataony i Heroda Mpanjaka mba hamono ny Isiraelita tao Goliath. Tsy afaka nangataka izany i Heroda. Rehefa avy nivoaka i David, dia nidradradradra izy ary nokapohiny tamin'ny milina antsamotady ny lohany Goliata. Nianjera tamin'ny tany ilay goavambe gaga, ary nanatsoaka sabatra mafy i David ary nanapaka ny lohan'i Goliata. David dia aseho ho toy ny zazalahy mpiandry ondry mahafatifaty ao amin'ilay sarivongana, manao satroka mpiandry ondry, mitazona sabatra amin'ny tanany ankavanana ary manitsaka ny lohan'i Goliath voapaika eo ambanin'ny tongony. Miala sasatra tokoa ny endrika tarehiny ary toa mirehareha kely.
Donatello (Donatello 1386-1466) no mpanakanto voalohany tamin'ny vanim-potoana voalohan'ny Renaissance tany Italia ary mpanao sary sokitra niavaka indrindra tamin'ny taonjato faha-15. Ny sary sokitra dia ao amin'ny Bargello Gallery any Florence, Italia.
Ny sarivongan'i "David" dia noforonina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-16. 3,96 metatra ny haavon'ny sarivongana. Izy io dia asan'ny solontenan'i Michelangelo, tompon'ny sary sokitra Renaissance. Izy io dia raisina ho iray amin'ireo sarivongana lehilahy mirehareha indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto tandrefana. Ny sary an'i Michelangelo an'ny lohan'i David dia nivily somary miankavia talohan'ny ady, nibanjina ny fahavalo ny tanany havia, nitana ny antsamotady teo amin'ny sorony ny tanany ankavia, nilatsaka voajanahary ny tanany ankavanana, somary nikatona ny totohondry, nilamina ny fisehoany, mampiseho ny fahatokisan'i David , herimpo ary faharesen-dahatra ho an'ny fandresena. Misy ao amin'ny Akademia Florence momba ny hai-kanto.
Ny Statue of Liberty (Statue Of Liberty), fantatra ihany koa amin'ny Liberty Enlightening The World (Liberty Enlightening The World), no fanomezana 100 taonan'i Frantsa ho an'i Etazonia tamin'ny 1876. Ny Statue of Liberty dia nofaran'ilay mpanao sary sokitra frantsay malaza Bartholdi ao anatin'ny 10 taona. Ny Lady Liberty dia mitafy fitafiana amin'ny fomba grika taloha, ary ny satro-boninahitra izay anaovany dia maneho ny fitambaran-fito amin'ny kaontinanta fito sy ny ranomasina efatra eto an-tany.
Mihazona ilay fanilo maneho ny fahalalahana amin'ny tanany ankavanana ilay andriamanibavy, ary ny tanany havia kosa mitazona ny “Fanambarana ny fahaleovan-tena” voasokitra tamin'ny 4 Jolay 1776, ary teo ambanin'ny tongony dia nisy fatotra sy gadra vy ary gadra vaky. Maneho ny fahalalahana izy ary miala amin'ny fameperana ny fanaparam-pahefana. Vita ary naseho tamin'ny 28 Oktobra 1886. Ny firafitra anatiny amin'ilay sarivongana vy vita amin'ny vy dia noforonin'i Gustave Eiffel, izay nanangana ny Tilikambo Eiffel tany Paris. Ny Statue of Liberty dia 46 metatra ny haavony, ary 93 metatra ny fotony ary 225 taonina ny lanjany. Tamin'ny 1984, ny Statue of Liberty dia voatanisa ho lova ara-kolotsaina manerantany.
"The Thinker" dia mamolavola lehilahy miasa matanjaka. Niondrika ilay goavambe, niondrika ny lohaliny, nametraka ny saokany ny tanany ankavanana, nijery am-pahanginana ny zava-doza nitranga tany ambany. Ny fijeriny lalina sy ny fihetsika hanaikitra ny molony amin'ny molony dia nampiseho fihetseham-po naharary izaitsizy. Mitanjaka ny sary sokitra, misy valahana somary miondrika. Ny tanana havia dia apetraka voajanahary amin'ny lohalika ankavia, ny tongotra havanana manohana ny sandry havanana, ary ny tanana ankavanana dia nesorina tamin'ny sary sokitra maranitra nilahatra. Ny totohondry voafatotra dia voapotsitra amin'ny molotra. Tena mety. Amin'izao fotoana izao dia mihombo ny hozany ary mitebiteby ary mampiseho tsipika feno. Na dia mbola eo aza ny sarin'ny sarivongana, dia toa naneho izany fa manao asa mavesatra izy amin'ny fanehoana fanehoan-kevitra manetriketrika.
"The Thinker" dia maodely iray amin'ny rafitry ny sanganasan'i Auguste Rodin amin'ny ankapobeny. Izy io koa dia taratra sy taratry ny fanaony kanto. Izy io koa dia taratry ny fananganana azy sy ny fampidirany ny rafitry ny fihevitr'ireo zava-kanton'ny olombelona -Ny fijoroana vavolombelona nataon'i Rodin.
Jeff Koons (Jeff Koons) dia mpanakanto malaza amerikanina. Tamin'ny 2013, ny alikany balaonina (volomboasary) dia vita tamin'ny vy tsy misy fangarony, ary afaka nametraka vidiny 58,4 tapitrisa dolara i Christie. Koons koa dia namorona kinova hafa amin'ny manga, magenta, mena sy mavo.
Ny sangan'asa malaza "Spider" nataon'i Luis Bourgeois dia 30 metatra ny halavany. Ny tena mahavariana dia ny sary sokitra lehibe dia misy ifandraisany amin'ny renin'ilay mpanakanto, izay mpanamboatra karipetra. Ankehitriny, ireo sary sokitra hitantsika, toa marefo, tongotra lava, miaro amin-kerimpo atody marbra 26, toy ny hoe hianjera avy hatrany izy ireo, nefa koa nahataitra ny tahotra ny besinimaro, hala ny fisehoany miverimberina. 1996. Ity sary sokitra ity dia ao amin'ny tranombakoka Guggenheim any Bilbao. Hoy i Luis Bourgeois indray mandeha: Arakaraka ny maha-antitra ilay olona, ​​izy no marani-tsaina kokoa.
Iza no namorona ny Terracotta Warriors sy ny Soavaly Qin Shihuang? Tombanana ho tsy misy valiny, fa ny fiantraikany amin'ny zavakanto taty aoriana dia mbola misy ankehitriny ary nanjary fironana lamaody.